မိုဘိုင်း နှင့် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ၀က်ဆိုဒ် လေးဖြစ်ပါသည်
Download Unlock Tool ဒေါင်းလုပ် ဆွဲထားတဲ့ Unlock Tool ထဲက တရုတ်စာပါတဲ့ exe file ကို run လိုက်ပါ။
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1997030အဲဒီလင့်မှာ Xperia S အတွက် CWM Recovery နဲ့ Firmware တွေရှိပါတယ်။ Recovery မတက်ရင် CWM ပြန်သွင်းကြည့်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ။
Lenovo A2207 Tablet ကို လုပ်လို့ရပါပြီ။ အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပါ။ Huawei C8813 မှာ ၁၅၀၀ MEC SIM Card မသိတော့တဲ့ Error ဖြေရှင်းနည်း
Huawei Y300C Root and CWM Recovery ကဲ...Huawei Y300C ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး Root လုပ်တဲ့ နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သေချာစမ်းသပ်ထားပြီးသားမို့ သူငယ်ချင်းတို့လည်း စိ...
အရင်ဆုံး လိုအပ်တဲ့ File (၄) ခုကို download ဆွဲပါ။မိမိ tablet မှာ ရှိတဲ့ data တွေအားလုံးကို backup လုပ်ထားပေးပါ။ like လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်....
မြန်အောင်သား. Picture Window template. Powered by Blogger.